Akụkọ Bible: Site n’Iju Mmiri ruo ná Mgbapụta n’Ijipt - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Ọ bụ naanị mmadụ asatọ lanarịrị Iju Mmiri ahụ, ma ka oge na-aga, ha mụbara ruo ọtụtụ puku. Narị afọ atọ na iri afọ ise na abụọ mgbe Iju Mmiri ahụ gasịrị, a mụrụ Ebreham. Anyị ga-ahụ otú Chineke si mezuo nkwa ya site n’inye Ebreham nwa aha ya bụ́ Aịzik. Anyị ga-ahụkwa na n’ime ụmụ abụọ Aịzik mụrụ, Chineke họọrọ Jekọb.
Jekọb nwere ezinụlọ buru ibu nke ụmụ ndị ikom iri na abụọ na ụfọdụ ụmụ ndị inyom mejupụtara. Ụmụ ndị ikom iri nke Jekọb kpọrọ Josef nwanne ha nke nta asị ma resị ya ndị Ijipt ka ọ gaa bụrụ ohu. Ka e mesịrị, Josef ghọrọ onye ọchịchị dị mkpa n’Ijipt. Mgbe ajọ ụnwụ dara, Josef lere ụmụnne ya ule iji mara ma hà agbanwewo. N’ikpeazụ, ezinụlọ Jekọb dum, bụ́ ụmụ Izrel, kwagara Ijipt. Nke a mere na narị afọ abụọ na iri afọ itoolu ka a mụsịrị Ebreham.
Ụmụ Izrel biri n’ala Ijipt ruo narị afọ abụọ na iri na ise sochirinụ. Mgbe Josef nwụsịrị, ha ghọrọ ndị ohu n’ebe ahụ. Ka oge na-aga, a mụrụ Mozis, Chineke jikwa ya napụta ụmụ Izrel n’Ijipt. Ihe a niile, bụ́ akụkọ were narị afọ asatọ na iri afọ ise na asaa, dị ná NKEBI NKE 2.